ल्होसार होइन, ल्होछार हो – Everest Times News
देश विदेशमा छरिएर बसिराख्नु भएका मान्यजन र प्रियाजन तमुहरु सबै सबैमा च्यु ल्होछारको हार्दिक शुभकामना । हरेक वर्ष ल्होसार होइन ल्होछार हो भन्दै कुनै न कुनै प्रसङ्ग जोडदै आएको छु । यस पटक ल्होसार पक्षधरका मुख्यतय दुई अभियन्ताहरु जसलाई उनीहरु संस्कृतिविद, संस्कारविद, खेगीचिबा नजाने के के भन्छन । उहाँहरुको नाम सबैलाई थाह छ मैले भनिरहनु पर्दैन । उहाँहरुको भिडियो अन्तरवार्ताहरुमा हरेक वर्ष भाषा फेर्दै आएका कुराहरुलाई पस्काउने प्रयास गर्दै छु ।
एकजनाले आफ्नो लेखहरुमा ल्होछार लेख्थे । त्यसपछि के के सोच्नु भयो तमु संघ संस्थाहरुलाई ल्होसार भन्न सिकाए । हुँदाहुँदा गत वर्ष ल्होछार अपभ्रंश शब्द हो । अर्धचेतनशीलहरु र बालबालिकाहरुले मात्रै ल्होछार भन्छन् भन्न पनि भ्याए । त्यसबाट बुझिन्छ कि उहाँ आफै अर्धचेतनशील अबस्थामा हुनुहुदो रहेछ । कुवामा बसेर दुनियाँ देखेको महसुस गर्नुहँुदो रहेछ । अर्को संस्कारविदले बत्तीस तेत्तिस हजार वर्ष पहिले देखिनै ल्होसार भन्दै आएको छ भन्नुहुन्थ्यो । ल्हो कहिले नयाँ हुदैन भन्नुहुन्थ्यो । तमु शास्त्रको ब्याख्य गर्दै ल्होछार कुनै पनि हालतमा हुन सक्दैन भन्नु हुन्थ्यो ।
सारको धेरै अर्थहरु जोड्दा जोड्दै गत वर्ष सारको अर्थ सफलता हो। । ल्होछार र ल्होसार दुवै हाम्रै हो भन्न पनि भ्याए । यो वर्ष वहाँहरुले के के भन्नेहुन् बुझ्न बाकीनै छ । केही तमु मित्रहरुभने हावामा ताली पिट्दै उफ्री राखेका छन् । सही गलतको चासोनै राख्दैनन् । मलाइ लाग्छ कि तमु भाषा र ल्हो निर्धारण भए संगै ल्होछार शब्द पनि आएको हो । चोंक्युई मौखिक शास्त्र बखन गर्ने खेगीहरुले ल्होसाराबा तदिगेओ(बर्ग फुलोस है) भनीदिने अशिमलांलाई नै ल्होसार भनेर जथाभावी बोल्ने र लेख्ने गरेका छन् बिशेषगरी ब्यानर इत्यादिमा त्यो गलत हो ।
मुसार(आकाशको तारा), साराबा(फुलेको), सा(माटो), सा(दांत) भन्ने उधाहरणहरु यहाँ सान्दर्भिक छैन । बत्तीस तेत्तिस हजार वर्ष पहिले देखिनै ल्होसार भन्दै आएको हो भन्ने कुरा पनि कहिँकतै मिल्दैन किनभने त्यो घुमन्ते युगमा तमुको मात्रै छुट्टै अस्तित्व थिएन । यसरी वहाँहरु दुबै जनाले असान्दर्भिक, आधारहीन, तथ्यहीन र ढुलमुले कुराहरु गरिरहनु हुँदा मलाइ लाग्छ कि उहाँहरु दुवै जना कुनै किसिमका विद्वान होइनन । प्रतिशोधको हिसाबले मात्रै अभियान चलाई राखेका हुन् ।
म पनि कुनै ठुलो पदधारी विद्वान होइन र पनि मेरो अध्यायन, अनुसन्धान र बिश्लेषणले मान्न ेशैली र बिधि जेजस्तो भए पनि लेख्दा र बोल्दा ल्होछार शब्द नै ठिक हो भन्ने बलियो आधारहरुमा ३० बुदाँहरु संकलन गरेको छु । ती बुँदाहरु पछि लामो लेखमा लेखुंला । जसमध्ये सबैले प्रष्ट बुझ्ने एउटा बुँदा यो हो कि सेकेन्ड, मिनेट र घण्टा हुदै हरेक २४ घन्टा पछि शुभबिहानी आउछ । त्यसरी नै दिन, हप्ता र महिना हुँदै ३६५ दिन पछि नयाँ वर्ष आएझै तमुहरुको १२ ल्हो पनि क्रमश ल्होकोर हँुदै हरेक ल्हो नयाँ भएर आउने हुनाले ल्होछार भनिएको हो । यो नै तमूहरुको नयाँ वर्ष हो जस्तै च्युल्होछार, लोंल्होछार, त्वोंल्होछार आदि हुदै फोंल्होछार । ल्होलाई दुई पटक लेख्ने र बोल्ने गर्दा अशुद्ध हुन जान्छ जस्तै च्युल्हो ल्होछार । पृथ्वीसँगै हरेक चिज वक्र चक्रमा घुम्ने भएकोले आआफ्नो गति निर्धारण गर्दै हरेक चिज नयाँ भएर आउछ । यो नै प्रकृतिको नियमसँगै वैज्ञानिक आधर हुन् । बरु यहाँ ल्होसार शब्द खस भाषाकरण भएको जस्तो लाग्छ । सार भनेको खस भाषामा सार्नु हो तसर्थ ल्होसारको अर्थ एउटा ल्होबाट अर्को ल्होमा सार भनेको जस्तो भयो । छ्याजालो र नमस्कार भन्दा अर्थ मिलेकोझैँ तमु ल्होछार र गुरुङ ल्होसार भन्दा पनि अर्थ मिल्न आउँछ ।
तमु एकता र एकरुपताको नारा लगाउदै भित्र भित्र आफ्नो गुट बलियो बनाउन साथीहरु लागेका छन् । आजभोलि सामाजिक सन्जालमा तमु जातिहरु एक हौ भन्दै तमु र गैरतमु भन्ने शब्दहरु ओकालन थाले । आफै जान्नेबुझ्ने अरुको सुन्दै नसुन्ने पनि हुना थाले । यसरी विकृति बढ्दै जाने हो भने तमुको उन्नति, एकता र एकरुपता कसरी हुन्छ ? तमु पहिचानको संरक्षण र प्रदर्शन कसरी हुन्छ ? वास्तविक तमु को हो एकदिन के त्यो बहसको दिन आउदैन र ? त्यसकारण तमु मित्रहरुलाई मैले बुझेको कुराहरु शेयर गर्न चाहन्छु कि तमु भाषा, धर्म, भेषभुषा, संस्कार र संस्कृति जस्ता पहिचानको संरक्षण भन्दै केवल खाने पिउने, नाच्ने गाउने र मोजमस्ती गर्ने मात्रै नगरौ । जमाना धेरै अगाडि बढिसकेको छ । छेपारोले घोच्च समातेझैँ पनि गर्नु भएन । कतिपय कुराहरुमा परिमार्जन गर्दै पनि जानुपर्ने हुन्छ । ज्ञानको आँखा खोलेर अरु प्राविधिक कुराहरु शुद्ध बोल्ने र शुद्ध लेख्नेसँगै एकता र एकरुपतामा पनि ध्यान दिऊ ताकि सुख शान्ति र समृद्धिको तमु संसार बन्न सकोस यसपटकलाई यति मात्र धन्यवाद ।